CALI KHALIIF OO EEDEEYAY CABDIQASSIM !
Dubai,14th October 2001
Sidii la filayay ayaa madaxa Golaha Wasiirada Dawladda KMG ah Cali Khaliif Galaydh ka hadlay shalay idaacadda BBC-da isagoo si kulul eedeyn ugu soo jeediyay Madaxweynaha KMG ah Cabdiqassim S. Xasan iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Cabdalla Deerow Isaaq .
" Waxaan si aad ah u tuhunsanahay in Cabdiqassim uu la ogaa hadalka Cabdalla Deerow ka sii daayay bbc-da, waayo waxaan aaminsanahay inuusan warkaas ku dhiiran karin. Hadii aniga la ila xisaabtamayo , waa in la i sugaa,si Cabdiqassim buugiisana baarlamaanka loo hor dhigo " ayuu yiri Cali Khaliif .
Mar wax laga weydiiyay asbaabaha keenay arrinkan, wuxuu Cali Khaliif ku jawaabay inay la tahay in Cabdiqassim iyo Cabdalla Deerow u doonayaan inay xilka ka qaadaan , si ay u helaan " cid iga dhega nuqul oo ay ku shubtaan waxay doonayaan , maadaama aan anigu ahay nin axdiga ku adag ".
Wuxuu kaloo Cali Khaliif hadalkiisa ku sheegay in lacago farabadan lagu faraqay Muqdisho intuu ka soo maqnaa oo jeebka la buuxsaday,lana arki doono ciddii lacagahaas mas'uulka ka ah
.Wuxuuna ku daray hadalkiisa in Hogaamiye kooxeedyada ka soo horjeeda Dawladda MKG ah ka sokow, ay iyaga madaxdooda ah isaga daran yihiin, oo uu midba midka kale eeganayo .
Ugu danbeyntii wuxuu Cali Khaliif sheegay inuu socdaalkiisa New York sii wadan doono, walow uu maqlay warar sheegaya in Wasiirka Arrimaha Dibedda Buubaa uu isna tagayo Washington , laakiinse uu socdaalkiisu yahay ka saxa ah ee shraciga waafaqsan.